Saturday December 15, 2018 - 19:00:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
R/wasaaraha wadanka Australia ayaa ku dhawaaqay in dowladiisa ay magaalada Qudus u aqoonsan tahay caasimada Yuhuuda, balse aysan waqtiyada soo socda safaradeeda halkaas geyn doonin.
Scott Morison oo ah R/wasaaraha dalka Australia ayaa hadalkan ka sheegay Machad ku yaala magaalada Sydney oo uu ka jeedinayay khudbad ku aaddan siyaasahada arimaha dibada ee wadankiisa, waana markii ugu horreysay oo dowladani ay cadeyso mowqifkeda ku aadan magalada Qudus.
Wuxuu carabaabay in magalada Qudus ay ka furanayaan Xafiisyo ay ku shaqeyaan balse aysan dhismaha safarrada halkaas geyn doonin illaa inta xal kama dambeys ah laga gaarayo murunka ka taagan magalada Qudus, taas oo maamulka Yuhuudda ay doonayaan in ay xoog kaga qaataan dadka falastiniyiinta ah.
Morison ayaa ku faanay sida ay xukuumaddiisa u garab taagan tahay in wadamada bariga dhexe lagu dhaqo Dimoqoradiyadda Calmaniyada ah, isagoona eedeyn kulul u jeediyey Hey’ad gaaleedka Q.Midoobe oo uu ku eedeyey in ay isha uun ka fiirsaneyso mandiqadan oo dadka yuhuuda ah ay kula kulmayaan handadado xoggan.
Shabakadda Australia ee difaaca Falastiin ayaa iyana hadal kasoo saartay go’aanka Xukumada Sydney waxa ayna cabirtay sida ay uga xuntahay talaabada ay qaadday dowladda, taas oo ay ku sheegtay in ay caqabad ku noqon doonto xal waara oo laga gaaro arrinta filistiin.
Agaasimaha Shabakaddan ayaa sheegay in qaraarka dowladda Australia iyo rabitanka mamulka Yuhuuda ay is khilafsan yihin, maadama ay Australia u aqoonsatay Qudusta galbed inay caasimad u tahay mamulka Yuhuuda, halka qeybta barina ay u aqonsantahay in ay dadka falastiniyiinta ah leyihin arrinkaas oo ka hor imanaya rabitanka yahuudda ee ku aadan in ay la wareegaan magalada Qudus oo idil.